Swiss Super League - MuBasel Vs Luzern | Soccer nezvakafanotaurwa | Bet mazano
MuBasel Vs Luzern
Swiss Super League – MuBasel Vs Luzern , betting tips by BETTIPS4ALL-football predictions
Match musi: 30 Jul 2017 | Posted: 30 Jul 04:01 2017 GMT + 2 | Tip aiona 2707 nguva.
Swiss Super League – MuBasel Vs Luzern – nhabvu nezvakafanotaurwa
Swiss Super League – MuBasel Vs Luzern , nhabvu nezvakafanotaurwa-muBasel, Vanotsigira Swiss Super League okupedzisira 8 makore, vari vachichingura Luzern kuti mutambo uyu. Vakatanga chirongwa ane 2-0 kurasikirwa Vs Young Boys, kunyange kuti vave kushamiswa zhinji hazvishandi ini here kushamiswa zvose, uchiwana pfungwa Young Boys kukuru chisati chavapo mwaka. zvakadaro hazvo, nhasi nguva yayo kuti Champions kubata takunda wavo wokutanga pamberi pachavo Fans dzavo. Ivo zvakandibatsira chisati chavapo kuzvirunga vakunde Vs zvikwata sezvo Athletic Club & Sporting CP.
Luzern akatanga aine takunda 1-0 pamba VS Lugano pashure kunonoka chinangwa ne Juric. Ivo vaiva nedambudziko iri pre mwaka zvazvo, ne 0 vakunde ari Friendlies uye kurasikirwa Vs Osijek muna Europe League zvinodiwa. The chikwata apedza 5th okupedzisira mwaka, nhoroondo 14-8-14.
* MuBasel rutsvene yokupedzisira 4 machisi Vs Luzern. mutambo uyu dzakaguma 3-1 okupedzisira mwaka.
* MuBasel rutsvene 12 wekupedzisira 14 machisi Vs Luzern. mu 10 ivavo, muBasel scored 3 kana zvinangwa zvakawanda.
MuBasel apedza yokupedzisira mwaka ane musha chinyorwa 13-5-0 uye chinangwa musiyano 50-17. Havana kuonekwa sezvo favorite makuru pano. Vakuru League, Young Boys, yakahwina mutambo wavo Mugovera saka munhu takunda pano kunokosha kuti muBasel kuti chokwadi. Zvinofanira kuva kirasi musiyano pakati izvi zviviri, saka ndinofunga mikana vari makuru nokuda takunda pamwe zvinenge 2 zvinangwa Basel.Play yakachengeteka uye regai wokubheja kuva smarck.Bettips4all ichakupa zvakanakisisa it.Stay vorega.
Sheffield Wed vs Luton ( pasi 2.5 zvinangwa & 1.90 )
St Pauli Win Vs Avangard Dresde (1 @ 2.00 )